Imithetho yokhula yase-Illinois - ukusetshenziswa komuntu siqu kwe-cannabis & ukwenziwa okusemthethweni kwezomthetho e-Illinois 'CRTA
Ukwenza kube semthethweni ukushintsha imithetho yokhula yase-Illinois ngo-2020 - ungahle ufune ukwazi ukuthi ungaba namalini noma ukhule kangakanani - sichaza izindaba zokukhula kwasekhaya nezomthetho e-IL. Zingaki izitshalo ongazitshala e-Illinois?
Ufuna ukuzama i-Delta-8 THC?
Ithini imithetho emisha yokhula yase-Illinois ngokusetshenziswa komuntu siqu kwensangu e-Illinois?
Umthetho omusha osemthethweni wokusetshenziswa kwensangu yokuzijabulisa wedluliselwa e-Illinois ngoMeyi 31, 2019. Umbuso waba ngowesi-11 ezweni ukuvumela ukusetshenziswa kwensangu yokuzijabulisa, kepha umbuso wokuqala wokufaka ngokusemthethweni insangu ngenqubo yomthetho.
Ngokwalo mthetho omusha we-cannabis, "UMkhandlu Kazwelonke uthola futhi usho ukuthi ukusetshenziswa kwe-cannabis kufanele kube semthethweni kubantu abaneminyaka engu-21 noma ngaphezulu."
Imithetho yokhula yase-Illinois
Ngezansi sixoxa okusha Imithetho yokhula yase-Illinois osekuqalile ukusebenza kusuka ngoJanuwari 1, 2020, kuya phambili. Khumbula ukuthi imithetho ye-cannbis ivela ngokushesha, ngakho-ke njalo hlola emuva ukuthola imithetho yamanje ye-cannabis e-Illinois.
I-Illinois ayinayo Imithetho Yensangu
I-Illinois yathathela indawo igama elithi "insangu" negama layo lemvelo, iCannabis, eminyakeni eminingi eyedlule. Ngisho nangesikhathi sokuvinjelwa, i-Illinois yabiza insangu njenge-cannabis. Lokho kuyaqhubeka nanamuhla ngomthetho omusha we-Illinois Cannabis Regulation and Tax Act.
Ngubani ovunyelwe ukuthengisa insangu?
Ekuqaleni, izisebenzi ezinamalayisense kuphela ezivunyelwe ukuthengisa insangu yezokwelapha lapho umthethosivivinywa uba umthetho ngoJanuwari 2020. Kuzonikezwa amanye amalayisense kwezinye izitolo maphakathi nonyaka.
Kakade, kunenombolo enhle yama-dispensaries ezingxenyeni ezihlukene zombuso. Ngokuqala konyaka ka-2020, kubikwa ukuthi cishe ezitolo ezingama-300 kuzobe sekuthengiswa insangu.
Kodwa-ke, kusazoba kuhulumeni kamasipala nowesifunda ukunquma ukuthi abathengisi bensangu bayakwazi yini ukusebenza ezindaweni zabo zokuphatha.
Ungayibhema kuphi insangu?
Ngokomthetho omusha, ukubhema insangu kuzovunyelwa ekhaya nangaphakathi kwezindawo ezithengisa insangu. Kodwa-ke, ukubhema kuzokwenqatshelwa kulezi zindawo ezilandelayo:
Izindawo zomphakathi, njengemigwaqo namapaki
Ez ezimotweni noma ezomuntu uqobo noma ngenye indlela
Eduzane namahhovisi amaphoyisa, noma eduze nabashayeli bamabhasi esikole asasebenza
Ngaphansi kwesilungiselelo sesikole. Kodwa-ke, kuxolelwa abantu mayelana nodaba lwensangu yezokwelapha
Eduzane nanoma ngubani ongaphansi kweminyaka engama-21
Ngenkathi kubhema insangu ezindaweni zomuzi wakho kuvunyelwe, abanikazi bezindawo banelungelo lokukuvimbela okufanayo ezindaweni zabo. Amakolishi namanyuvesi nawo azovunyelwa ukwenqabela ukubhema ukhula ngaphakathi kwezikhungo.
Inani Lokhula One Can Possess
Ngokomthetho, izakhamizi zase-Illinois zizovunyelwa ukuba namagremu angama-30 e-cannabis flower, amagremu ama-5 we-cannabis concentrate, kanye nama-milligram angama-500 wemikhiqizo efakwe i-cannabis. Imikhiqizo efakwe i-canabis ifaka ama-tincture nama-edibles.
Kuzofakwa intela yokuthengisa kuyo yonke imikhiqizo yensangu. Isibonelo, imikhiqizo i-THC engaphansi kwama-35% izoba nentela yokuthengisa engu-10%. Abakwa-Edibles nanoma yimiphi imikhiqizo esetshenzisiwe ye-cannabis izokhokhiswa intela ngo-20% Imikhiqizo enenqwaba ye-THC engaphezu kwe-35% izoba nentela yokuthengisa ecishe ibe ngu-25%.
Ngaphandle kwentela yokuthengisa, kuzofakwa intela enkulu yamaphesenti angama-7 insangu ethengiswa ngabalimi kuma-dispensaries. Kungenzeka kakhulu ukuthi, ekugcineni kosuku, le ndleko izodluliselwa kumthengi.
Ngabe I-cannabis Ethengiswayo Izovelaphi?
Njengamanje, kunezindawo ezingama-20 zokulima insangu e-Illinois. Ekuqaleni kukaJanuwari 2020, lezi kuzoba izikhungo kuphela ezizovunyelwa ukutshala insangu. Kungakapheli unyaka, abalimi bezandla abanentshisekelo yokutshala insangu bazovunyelwa ukuletha izicelo zabo zelayisense. Amalayisense azonikezwa izikhungo ezingakhula zifike ezinyaweni ezingama-5000 zokhula.
Zingaki izitshalo ongazitshala e-Illinois?
Ukulima insangu kuzoba semthethweni kulabo abathatha insangu ngenhloso yokwelashwa.
Tiziguli ze-hese zizovunyelwa ukutshala izitshalo zensangu ezi-5 nganoma yisiphi isikhathi.
Ngakolunye uhlangothi, abasebenzisi bensangu yokuzilibazisa ngeke bavunyelwe ukutshala insangu emakhaya abo.
Ukwenza kanjalo kuzoheha inhlawulo yomphakathi engu- $ 200.
Ubani Ovunyelwe Ukukhulisa I-Cannabis e-Illinois
Uma ubhaliswe ngaphansi kokusebenzisa okunobubele kohlelo lwe-cannabis yezokwelapha, futhi ungaphansi komkhawulo wobudala obekwe ngumthetho, kufanelekile ukuthi ukhule insangu. Udinga nokuba yisakhamuzi salesi sifundazwe ukuze uvunyelwe ukukhulisa ukhula ekhaya. Ngokwalo mthetho, umuntu ohlala khona "Umuntu ophethwe umbuso izinsuku ezingama-30."
Uma ukhula insangu, kufanele uthambekele ezitshalweni. Ungaba ne-ejenti ekwenzele lokhu okwesikhashana uma ungekho. Lokho kusho, izitshalo akufanele zifinyeleleke noma zisetshenziswe abanye abantu abangagunyaziwe.
I-cannabis ekhula ekhaya e-Illinois?
Ngokomthetho, izitshalo zensangu kuzofanele zikhule endaweni ebiyelwe neyivalwe. Lokhu kuzoqinisekisa ukuthi izitshalo azikwazi ukufinyelelwa ngabantu abangagunyaziwe. Ngeke kube semthethweni ukukhulisa izitshalo endaweni lapho umphakathi ungangena khona kalula.
Ngokwengeziwe, noma ngubani obhaliselwe ukutshala isitshalo se-cannabis akavunyelwe ukunikeza lesi sitshalo noma noma yimuphi umkhiqizo ofakwe insangu komakhelwane, abangani, noma omunye umuntu ngalokho. Ukwenza lokhu ngeke kuhehe isijeziso kuphela, kepha kuzoholela nasekuchithweni kwelungelo lokukhula kwekhaya.
Ungayitholaphi Imbewu Yensangu?
Imbewu yensangu izonikezwa ezindaweni ezihlukene ezinamalayisense okuthengisa imikhiqizo yensangu. Ngeke kube semthethweni ukuthenga imbewu egameni lomunye umuntu. Yilabo kuphela ababhaliswe ngaphansi kokusebenzisa isihawu abavunyelwe ukuthenga imbewu futhi bakhule izitshalo ze-cannabis ngaphandle kwelayisense.
Ukusetshenziswa Kwama-Cannabis Nokunikezwa Kwabantu Ngaphansi kweminyaka engama-21
Ngokomthetho omusha, ukutholakala nezidakamizwa zanoma ngubani ongaphansi kweminyaka engama-21 kuyicala lobugebengu. Ukujeziswa kwamacala anjalo kuzoncika ezimweni ezisetshenziswayo, futhi kungahlanganisa:
Ukuchithwa kwelayisense lokushayela uma umuntu eshayela imoto ngaleso sikhathi enze icala
Intengo engeqi ngaphansi kwama- $ 500 uma umzali noma umnakekeli evumela noma ngubani ongaphansi kweminyaka yobudala ukuthi asebenzise insangu
Igama les Jail uma kukhona obunye ubugebengu obenzekwayo ngenkathi bebuswa y insangu
Ngenkathi uzodingeka ukuthi ukhiqize amadokhumende okubonisa iminyaka yakho lapho uthenga imikhiqizo yensangu, imininingwane yakho ezovikelwa ngezinjongo zobumfihlo. Abathengisi ngeke badinge ukuqopha imininingwane yakho. Uma benza, kuzodingeka baqale bathole imvume yakho.
Lapho lo mthethosivivinywa usuwumthetho, labo abafuna ukuthatha insangu ngenhloso yokuzijabulisa noma yezokwelapha bazoba nesikhathi eslula sokuthola imikhiqizo yensangu abayidingayo. Bazothola inani lemali yabo ngoba konke okwenziwe ngebhizinisi kuzokwenziwa ngokuya ngomthetho.
Kodwa-ke, labo abangaphansi kweminyaka engama-21 kumele bayeke ukusebenzisa insangu noma ukuba nayo, nanoma yimiphi imikhiqizo ehambisana nayo ngoba lokhu kungababeka enkingeni nabasebenza kwezomthetho.